तपाईंको लागि सहि प्रतिरोध ब्यान्डहरू कसरी खरीद गर्ने Trivoshop
जुलाई 3, 2019 अली समीक्षा
तपाइँको लागि कसरी सही प्रतिरोध ब्यान्डहरू खरीद गर्ने
प्रतिरोध ब्यान्डहरू दर्जनौं तौल बराबर हुन्छन्, तर तिनीहरू सुपर हल्का वजन, कम्प्याक्ट, र पोर्टेबल हुन्। यदि तपाईं एक प्रभावी कसरत प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं एक प्रतिरोध ब्यान्ड यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ एक उत्तम विकल्प हो।
यदि तपाईं एक डम्बल व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईं ब्यान्डहरू प्रयोग गर्नबाट अलग रहनुभएको छ किनकि तपाईंलाई विश्वास छ कि तिनीहरू उपयोगी छैनन् वा हुनसक्छ तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि उनीहरूसँग अब के गर्ने भनेर केही फरक कुरा गर्ने समय हो।
तपाईंले प्रतिरोध ब्यान्डहरू किन प्रयोग गर्नुपर्दछ?
तपाईंको सन्तुलन र समन्वय सुधार गर्न।
ब्यान्डहरूको प्रयोगको बखत, तपाईं यस्तो तनाव महसुस गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको शरीरलाई स्थिर बनाउन बाध्य पार्छ। यी आन्दोलनहरूमा तपाईको समन्वय र सन्तुलन बढाउने नियमित तौल प्रशिक्षण भन्दा बढी मांसपेशी समूहहरू सामेल छन्।
आफ्नो शरीर लाई चुनौती दिन।
प्राय: वजनको सीमा हुन्छ जब यो आउँदछ कि तपाईं कति व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रतिरोध ब्यान्डहरूको साथ, तपाईं सिर्जनात्मक हुन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईं चाहानुहुन्छ। उनीहरूले तपाईको स्थिति परिवर्तन गर्नका लागि धेरै तरीकाले मांसपेशीहरूको कसरत गर्दछन् जुन तपाईंलाई थाहा थिएन कि अवस्थित पनि छ।
तपाईंको फिटनेस स्तर बढाउन।
ब्यान्डको उज्ज्वल पक्ष भनेको यो हो कि तिनीहरू केवल शुरुवातीहरूको लागि मात्र होइन तर अधिक उन्नत व्यायामकर्ताहरूको लागि पनि उपयुक्त छन्। तपाईं आधारभूत चाल र गहन workouts को लागी उही बैन्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रतिरोध ब्यान्डहरू खरीदका लागि सुझावहरू
एक भन्दा बढि छ।
धेरै जसो ब्यान्डमा र colors्ग हुन्छ र तनाव स्तर भिन्न गर्न। तपाईं प्रकाश, मध्यम, भारी, वा थप भारीबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तम कम्तिमा तीन बिभिन्न आकारमा ब्यान्डहरू हुनु राम्रो हुन्छ किनकि बिभिन्न मांसपेशी समूहहरूलाई विभिन्न स्तरको प्रतिरोध आवश्यक हुन्छ। धेरै व्यायामकर्ताहरूले छनौट गर्छन् व्यायाम व्यायाम ब्यान्ड त्यहाँ चार बिभिन्न स्तरहरू छन् जुन उनीहरूले छनौट गर्न सक्दछन्।
ब्यान्डहरू बोक्न सजिलो छ।
केहि ब्यान्डमा ह्यान्डलहरू छन्, र तिनीहरू आर्म workouts को लागी सही छन्। प्याकेजमा सामान्यतया कम्तिमा दुई फरक ब्यान्ड र विनिमेय ह्यान्डलहरू समावेश हुन्छ। यदि तपाईं प्याडेड ह्यान्डलहरूसँग ब्यान्डहरू खरीद गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाईंको झोलामा धेरै ठाउँ लिने छन्, र तिनीहरूलाई वरिपरि लैजान गाह्रो हुनेछ।
सबैभन्दा साधारणसँग सुरू गर्नुहोस्।
सुरू गर्नका लागि ह्याण्डलहरूको आधारभूत लामो ट्यूब छनौट गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नुभयो भने, तपाईं पछि अन्य विविधताको लागि अन्य ब्यान्डहरू किन्न सक्नुहुन्छ।
ब्यान्डहरूको प्रयोगको एक मुख्य फाइदा भनेको उनीहरूलाई संलग्न गर्न बिभिन्न तरिकाहरू छन्। तपाईं तिनीहरूलाई पार गर्न, तिनीहरूलाई बाँध्न, वा विभिन्न व्यायामहरू सिर्जना गर्न ढोका संलग्नक जस्ता सामानहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि खुट्टाको कफ, विभिन्न ह्यान्डलहरू, र अन्य सामानहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले पाउनुहुनेछ कि त्यहाँ धेरै जसो खेल स्टोरहरूमा प्रतिरोध ब्यान्डहरू उपलब्ध छन्। तपाईं एक भौतिक स्टोर मा आधारभूत प्रतिरोध बैंड किन्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं सामान संग अधिक विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ र, कहिलेकाँही, राम्रो गुणस्तर, तपाईं पाउन सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई अनलाइन अर्डर गर्नुहोस्.
प्रतिरोध ब्यान्डहरूको साथ प्रशिक्षण सबैको लागि उपयुक्त छ उमेर र गतिविधि स्तरको कुरा गर्दैन। तपाईको अभ्यासबाट अधिक पाउनको लागि, सही आकार र ब्यान्डको प्रकार किन्नुहोस्। ब्यान्डहरू शारीरिक उपचार वा पुनःस्थापनाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर हामी सिफारिस गर्दछौं फिटनेस पेशेवर वा चिकित्सकलाई तोकिएको निर्देशनका लागि।
यसमा दायर गरिएको: फिटनेस, प्रतिरोध ब्यान्ड, योग
शेभरोन आइकन अघिल्लो लेखमा IT IT र अधिक पछाडि एज टेक्नोलोजी काट्दै
अर्को लेखमा तपाईको होम अफिसका लागि उत्तम फर्नीचर शेभरोन आइकन